Maqaallada Bob Croft ee Martech Zone |
Maqaallada by Bob Croft
Infographic: Tilmaame-siinta Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka Email-ka ee Soo-dejinta
Jimco, Diisambar 11, 2020 Jimco, Janaayo 22, 2021 Bob Croft
Marka emaylladu soo boodaan waxay sababi kartaa khalkhal badan. Waa muhiim inaad gunta ka dhigato - dhakhso! Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ku bilowno waa inaan fahamno dhammaan walxaha galaya helitaanka emaylkaaga sanduuqa sanduuqa… tan waxaa ku jira nadaafadda xogtaada, sumcaddaada IP, qaabkaaga DNS (SPF iyo DKIM), waxyaabaha aad ka kooban tahay, iyo wixii ka warbixinta emailkaaga sida spam. Halkan waxaa ku yaal infographic oo bixinaya a
Muxuu Yahay Magaca Caan Bixinta IP-ga Sideebayna Dhibcahaaga IP-ga u Saameeyaan Soo-Saarista Emailkaaga?
Talaado, Disembar 8, 2020 Arbacada, December 30, 2020 Bob Croft
Markay tahay dirista emayllada iyo bilaabista ololeyaasha suuqgeynta iimaylka, dhibcaha IP-gaaga, ama sumcadda IP-ga, ayaa aad muhiim u ah. Sidoo kale loo yaqaan dhibcaha soo diraha, sumcadda IP-ga waxay saameyn ku yeelaneysaa soo-gudbinta emaylka, tanina waxay aasaas u tahay ololeynta emaylka guuleysta, iyo sidoo kale xiriirka ballaaran. Maqaalkan, waxaan ku baareynaa dhibcaha IP si faahfaahsan waxaanan eegeynaa sida aad u ilaalin karto sumcad IP xoog leh. Waa Maxay IP Dhibic
Madal otomaatig suuq geyn ah (MAP) waa softiweer kasta oo iswada howlaha suuq geynta. Nidaamyadu waxay caadi ahaan bixiyaan astaamaha otomaatiga ee ku jira emaylka, warbaahinta bulshada, hoggaanka guud, boostada tooska ah, kanaalada xayeysiinta dhijitaalka ah iyo dhexdhexaadiyayaashooda. Qalabku wuxuu bixiyaa xog-ururin suuq-geyn oo loogu talagalay macluumaadka suuq-geynta si isgaarsiinta loola beegsado iyadoo la adeegsanayo kala-soocid iyo shaqsiyeyn. Waxaa jira soo celin weyn oo ku saabsan maalgashiga marka suuqgeynta suuqgeynta si toos ah loo hirgeliyo oo si buuxda loo siman yahay; hase yeeshe, ganacsiyo badan ayaa sameeya khaladaad aasaasi ah